News-Rech Kiimikada Co.Ltd
Waxyaalaha lagu daro
Codsiga sulfate ferrous ee sibidhka
Ferrous sulfate monohydrate waxaa aasaas ahaan loo isticmaalaa inuu yahay wakiilka yareynta ee warshadaha sibidhka si loo gaaro aaladda CR (VI) oo ka yar 2 mg / L. Habka loo yaqaan 'monohydrated form' 30%, sulfate ferrous ayaa ah midka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo suuqa sibidhka si loo yareeyo chromium hexavalent. Badeecadani waa tan ugu kalsoon ee uguna nadiifsan ee soosaarayaasha sibidhka u isticmaali karaan marka la eego xulashooyinka kale ee suuqa yaal.
Bandhigga Carwo Bandhigga
Sababtoo ah faafida COVID-19, xayiraadaha safarka, iyo hubin la'aanta adduunka oo dhan, EUROTIER 2020 iyo VIV ASIA 2021 waxay wax ka beddeleysaa jadwalka muujinta si loo sugo bandhigyo guuleysta oo ka socda gobollada inta lagu jiro taariikhda ku habboon ee 2021.
NOOCYADA WEBSITE CUSUB EE KHATARTA KIIMKA
Si loo bixiyo adeeg macmiil oo tayo sare leh isla markaana waxtar badan, RECH CHEMICAL ayaa cusbooneysiiyay nooca cusub ee degelka laga bilaabo hadda. Waxaan rajaynaynaa taageerada macaamiisha sidii had iyo jeer ahayd. Waxaan had iyo jeer bixin doonnaa adeegga ugu fiican.
Rech Kiimikada Co.Ltd
Balixiangxie E1-12F NO.459, Furong Road Changsha Hunan Shiinaha